Waa dhul Nus boos banaan oo kuyaala Agagaarka #Jaayga Xaafada Showriyada ee Degmada_Dharkeynley. Waa dhul leh Documents saxan. Cabirkiisa waa 20x10m2. Qiimaha waa &#x1f4b5; $21,000 iyo Heshiis.
Dhul IIB ah - Xaafada Calaamadaha, Hargeisa, Somalia